Ithegi: UJohn Jantsch | Martech Zone
Maka: UJohn Jantsch
NgoMvulo, Oktobha 26, 2009 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 10, 2016 Douglas Karr
Ukuba ufuna ukuphanda ngosaziwayo oye wakwazi ukuvuselela ikhondo labo lomsebenzi kwimithombo yeendaba zentlalo, umzekelo wam wokuqala uya kuba ngu-MC Hammer. Wonke umntu ubonile uBuyile boMculo kunye nokunyuka kunye nokuwa kweMC Hammer njenge icon ye pop. I-MC Hammer isebenzise ngokufanelekileyo imithombo yeendaba zentlalo ukuzifaka kwakhona kwinkcubeko yanamhlanje. Ukuba ubuthandabuza ukumamela… musa. Ungumntu onobuhlobo ngendlela emangalisayo, ukrelekrele kwaye uthobekile- ulungele yena
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 4, 2009 NgoMvulo, Novemba 4, 2013 Douglas Karr
UJohn Jantsch ubuza umbuzo omkhulu, Ngaba unayo iMithombo yeendaba yeNtlalo engakhuphisani? Omnye umbuzo unokuba uthi, "Ngaba inkampani inokunyanzelisa amajelo eendaba ukuba angakhuphisani?" Iinkundla ngokwesiko ziye zayijongela phantsi imiqobo ebekwe ngabaqeshi kwilungelo labasebenzi lokufumana nokuziphilisa. Kuba iinkampani ezininzi ziyanyanzeleka ukuba zisebenzise imithombo yeendaba zentlalo kwaye zikhuthaze abasebenzi bazo ukuba bathathe inxaxheba, singalindela njani ukuba abo babesakuba ngabasebenzi bangabinayo? Yindibaniselwano yeenkampani, kodwa
Kulungile ukuNika ingxelo engeyiyo
NgoLwesithathu, Oktobha 3, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Xa ndithetha, njengoko ndenzile namhlanje, kubaphulaphuli boosomashishini abanomdla wokubhloga, le yingxelo ehlala ijika ibhalbhu ekhanyayo ezintlokweni zabo. Ewe. Unokumodareyitha izimvo. Ewe. Kulungile ukwala uluvo olubi. Ndicebisa kuwo onke amashishini ukumodareyitha izimvo. Ndikwakhuthaza la mashishini, nangona kunjalo, ukuba ahlalutye ithuba kunye nomngcipheko wokudibana nezimvo ezimbi. Ukuba kukugxeka okwakhayo okunokwenzeka